Global Voices teny Malagasy » Japana: Famarotam-baovao Nataon’ny Mpiasa tao amin’ny Mpampiely Vaovaom-panjakana NHK (Tapany Faharoa) · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 18 Avrily 2018 11:47 GMT 1	 · Mpanoratra Chris Salzberg Nandika Vero
Sokajy: Azia Atsinanana, Japana, Fitantanam-pitondrana, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Teknolojia, Toekarena sy Fandraharahàna
Efa nihena ny resabe tamin'ny herinandro momba ilay famarotam-baovao tao amin'ny mpampiely vaovam-panjakana NHK  tao Japana, niaraka tamin'ny fanoloan'i Fukuchi Shigeo , mpanolotsaina taloha ny Fivarotan-dabiera Asahi, an'i Hashimoto Genichi , ilay filohan'ny NHK tototry ny olana , izay nametra-pialàna andro vitsy talohan'ny faran'ny fepotoana fiasany. Voakiana  i Fukuchi noho ny tsy fahampian'ny traikefany anatin'ny asa fanaovangazety na ny fitateram-baovao.
Tamin'ity herinandro ty, niabetsaka ireo fanehoankevitra avy amin'ny bilaogera momba ilay raharaha famarotam-baovao tao amin'ny NHK (ho an'ny fampahalalàna fototra, jereo ny tapany voalohany )
Nanazava ny bilaogera iray fa mety hampamono tena ny gazety ny famarotam-baovao :
Mba tsy hahabe fiantraikany loatra ireo filazàna goavana eo amin'ny tsena, aorian'ny fiafaran'ny fifanarahana matetika ny orinasa vao manao fanambaràna. Kanefa, satria omena ny gazety alohan'ilay filazàna ny antontan-taratasy, mety hisy ny tranga tahaka io. Raha manao zavatra toy izao ny gazety, hitsahatra ny hanome vaovao azy ireo ny orinasa. Izay mety ho famonoan-tena ho an'ny indostrian'ny gazety.
Naneho hevitra mitovy amin'izay  tao amin'ny bilaoginy ny bilaogera sady mpanao gazety taloha tao Asahi, Hara Junjirou:
Ahiana ho mivarotra vaovao ho an'ny tombontsoany manokana ireo mpiasa miandraikitra ny fitaterana ho an'ny NHK. Fahafaham-baraka ho an'ny mpanao gazety rehetra raha izany no misy. Ary eo ambonin'izany, nitovy ny fotoana nivoahan'ireo olona telo nahiana. Mety hampisy olana goavana izany raha mitranga isan'andro.
Voarara ny famarotam-baovao tao anatin'ilay departemantan'ny vaovaom-barotra tao Asahi izay niasako. Vanimpotoana tsy nisian'ny fepetra noraisina momba ny famarotam-baovao izany ary tsy nisy lalàna nipetraka tahaka ny fitsipika anatiny, kanefa na tamin'izany aza dia tsy nisy fanitsakitsahana. Vao aingana no nisy [fitsipika tahaka izany] nampidirina tao amin'ny fitsipiky ny mpiasa.
Ny tsy fisian'ny fitsipika ve no nampisy izao tranga izao, sa efa niharatsy ny fitondrantenan'ny mpiasan'ny NHK, tsy mbola haiko tsara hoe iza amin'ireo ilay izy.
Na dia tsy nisy lalàna nipetraka aza, mbola tsy nivarotra vaovao mihitsy izahay. Noheverinay fa olana eo amin'ny fitsipi-pitondrantena eo amin'ny asa izany, zavatra izay mipoitra alohan'ny fitsipika. Efa mihozohozo ny fitsipi-pitondrantenan'ny mpanao gazety?
Anatin'ity vanimpotoana nidirantsika izao ity, voalaza fa ny fananana fitsipi-pitondrantena no angatahana amin'ny mpanao gazety, izay ambony kokoa nòho ny an'olon-tsotra. Lasa tsy hiteny ny marina amin-dry zareo intsony ny olona raha mampiasa ny vaovao izay fantany avy tamin'ny asany ho an'ny tombontsoany manokana ny mpanao gazety. Tsy mila ambara fa hetsika famonoan-tena ho an'ny gazety izany.
Teo anilan'izay, tsy nihevitra ny bilaogera Finalvent fa tena betsaka ny vola tafiditra tao anatin'ilay famarotam-baovao .
Ho an'ny tranga momba ireo mpitatibaovaon'ny NHK, teo amin'ny 500.000 yen teo ny tombony, ary tamin'ny fotoana nahazoana io vola io, niala tampoka ry zareo, noho izany, vola omby paosy fotsiny ilay izy hatrany am-boalohany. Fa raha eo amin'ny resaka karama isan-taona azon'ny mpitatibaovao iray ao amin'ny NHK, tsy misy dikany izany 500.000 yen izany. Raha ny marina, raha miteny aho hoe tsy misy dikany izany 500.000 yen izany, mety ho voaompa ao aminà fandefasana fanehoankevitra ratsy aho, nefa tsy mahantra tahaka ahy sy ny sipako ry zareo. Izay no izy ho anà mpitatibaovaon'ny NHK.
Ary farany, nandika ny tranga rehetra ho fahajamban'ny fiarahamonina amin'ny vola  ny bilaogera toritori 1987:
Hatramin'ireo taon'ny balaonina ara-toekarena, momba ny vola, vola, vola avokoa izao rehetra izao.
Diso mahajamba ny vola ka tena lasa fiarahamonina tsy misy hatsaràna intsony isika.
Anatinà fiarahamonina iray izay hananan'ny vola fahefana, simba ny fitondrantena ary tsy misy intsony ny fototry ny fiarahamonin'olombelona.
Tsy misy azontsika atao rehefa misy tranga toy izany ao Shina sy Korea atsimo, firenena akaiky antsika.
Kanefa, tsy mety raha lasa toy izany koa ity firenentsika ity.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/04/18/117049/
 famarotam-baovao tao amin'ny mpampiely vaovam-panjakana NHK: https://www.globalvoicesonline.org/2008/01/23/japan-insider-trading-at-public-broadcaster-nhk-part-1/
 tamin'ny fanoloan'i : http://blogs.rnw.nl/medianetwork/shigeo-fukuchi-appointed-new-president-of-nhk
 mety hampamono tena ny gazety ny : http://giijima.blog.ocn.ne.jp/blog/2008/01/nhk_230a.html
 Naneho hevitra mitovy amin'izay: http://jun.typepad.jp/junhara/2008/01/post-97e9.html
 tena betsaka ny vola tafiditra tao anatin'ilay famarotam-baovao: http://finalvent.cocolog-nifty.com/fareastblog/2008/01/post_8f54.html
 nandika ny tranga rehetra ho fahajamban'ny fiarahamonina amin'ny vola: http://blog.goo.ne.jp/toritori1987/e/4509ccc51e313c65be53600599186bb1